एयरलाइन्सको खर्च कटौती: पहिलो कैंची... :: रवीन्द्र शाही :: Setopati
एयरलाइन्सको खर्च कटौती: पहिलो कैंची कर्मचारीको तलबमा
रवीन्द्र शाही काठमाडौं,जेठ २६
चैत ११ गतेदेखि उडान ठप्प भएपछि एयरलाइन्सहरूले खर्च कटौती सुरू गरेका छन्। दैनिक नगद प्रवाहको आधारमा चलिरहेको व्यापारमा लामो समयसम्म शून्य व्यापार हुँदा खर्च कटौती सुरू गरिएको व्यवसायीहरूले जानकारी दिएका छन्।
चैतदेखि नै हेलिकप्टर तथा सीमित क्षेत्रमा उडान गर्ने साना एयरलाइन्सले कर्मचारीको तलब कटौती सुरू गरेका थिए। अहिले आएर ठूला एयरलाइन्स पनि त्यही बाटोमा गएका छन्।
कुनै पनि कर्मचारीलाई मर्का नपर्नेगरी व्यवस्थित तरिकाले तलब व्यवस्थापनमा गइसकिएको बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
'अहिलेको शून्य आम्दानी संकटको समयमा कुनै पनि कर्मचारीको उठिबास नहोस् भनेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं,' बस्नेतले भने।
बुद्धले महिनामा ४० हजार माथि तलब खानेहरूकोमात्र निश्चित प्रतिशत तलब कटौती गरेको छ। १२ सय कर्मचारी भएको एयरलाइन्सले अहिले पनि महिनामा ५ करोडसम्म तलबमै खर्च गरिरहेको छ।
एयरलाइन्सको कूल सञ्चालन लागतमा झन्डै ४० प्रतिशत भार मानव संशाधनको हुने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। तलब कटौतीमा एयरलाइन्सपिच्छे फरक मोडल रहेका छन्।
दोस्रो ठूलो यति एयरलाइन्सले न्यूनतम तलब राखेर त्यसमाथि हुने तलबबाट कटौती सुरू गरेका छ। एयरलाइन्समा कार्यरत एक उच्च अधिकारीकाअनुसार १५ हजार तलब सबैलाई दिने र त्यसमाथि हुने रकमको आधा कटौती गर्ने नीति व्यवस्थापनले लिएको छ।
यो व्यव्यवस्थाअनुसार २० हजार तलब पाउनेले १५ हजार आधार र त्यसभन्दा बढी ५ हजारको आधा कटौती गरेर १७ हजार ५ सय तलब पाउने छन्।
गएको पाँच वर्षदेखि तीव्र गतिमा बढिरहेको नेपालको हवाई क्षेत्रमा एकाएक कोरोनाले ब्रेक लगाइदिएको छ।
लकडाउनको २ महिनामै एयरलाइन्सहरूले कर्मचारीलाई तलब दिननसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अधिकांश एयरलाइन्सले उच्च तहका कर्मचारीबाट तलब कटौती गरेका छन्। यतिमात्र होइन अबको आउने महिनामा तलब झनै कटौती हुने छ।
दिनकै करोडको व्यापार हुने तथा महिनामा करोडौंको सञ्चालन लागत भएको श्री एयरलाइन्सले व्यापार सुकेपछि खर्च कटौतीका सबै औजार चलाइसकेको छ।
'यो बेला सबै बाँच्ने उपाया हामीले खोजिरहेका छौं। अहिलेसम्म जेनतेन चलाइरहेका छौं। अबका दिन भने अझै चुनौतीपूर्ण हुनेछन्' श्रीका प्रवक्ता अनिल मानन्धरले सेतोपाटीसँग भने।
श्रीमा चार सय बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। श्रीले धेरै तलब खानेहरूको तलब केही घटाएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
लकडाउनको पहिलो महिनामै आत्तिएका एयरलाइन्सहरू अबको अनिश्चित समयमा कसरी अघि बढ्लान्? के यहीबेला धेरै एयरलाइन्स बन्द हुनसक्ने सम्भावना छ?
कतिपय एयरलाइन्स सञ्चालकहरू अहिलेको अवस्था अझै २ महिना लम्बिएमा कोल्याप्स हुने अवस्था आउने बताउँछन्।
सानादेखि ठूलासम्म एयरलाइन्स उडान नभए पनि ठूलो सञ्चालन लगातमा हुन्छन्। अर्ब बढी ऋण तथा त्यसको किस्ताको भार नघट्ने भएकाले जति अनिश्चितता बढ्छ त्यति समस्या पर्दै जाने उनीहरूको तर्क छ।
केही खर्च व्यवस्थापन गरेको भए पनि कम्पनीमा कार्यरत कसैलाई पनि बेरोजगार हुन नदिने बुद्धका प्रबन्ध निर्देशक बस्नेतको भनाइ छ।
'गएको २३ वर्षमा हामीले धेरै संकट सामना गरेका छौं। गर्दै आएर नेपालकै व्यवस्थित प्रशासन बनाएर प्रतिफल पनि त्यहीअनुसार दिएकै थियौं। अहिले २/४ महिना समस्या आयो भन्दैमा हामी कसैलाई पनि बेरोजगार हुन दिँदैन। संकटको सामना हामी पनि कर्मचारीसँग मिलेरै गर्छौं,'उनले भने।
तर बस्नेत अहिलेको लकडाउन तथा त्यसको प्रभाव सेप्टेम्बरसम्ममात्र जाने अनुमान गर्छन्। थोरै रिजर्भ एका एयरलाइन्स छिट्टै संकटमा जाने छन्।
'त्यसपछिको लकडाउन राज्यले पनि थेग्न गाह्रो हुन्छ। उडान खुल्नेवित्तिकै हामी सस्टेन भइहाल्छौं' उनले भने।
विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाएर यात्रा खोल्नुको विकल्प कसैसँग नभएको र त्यसपछि एयरलाइन्सहरूलाई पनि केही सहज हुने श्रीका मानन्धरको भनाइ छ।
लकडाउनपछि कसरी कस्तो होला उड्डयन?
लकडाउन खुलेपछि एयरलाइन्सहरूका लागि कसरी उडान सुरू गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती देखिन्छ। उनीहरूले यसैका लागि आफ्नो तयारी गरिरहेका छन्।
आन्तरिक उडानको मार्केट लिडर बुद्धले आफ्नो केही योजना सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। अरुले पनि तयारी गरिरहेका छन्।
तर उनीहरूले अहिले बनाएको रणनीति त्यतिबेलामात्र प्रभावकारी हुनेछ। जसरी उनीहरूले लकडाउन खुल्ने अपेक्षा गरेका छन्। तर लकाडाउन अनपेक्षित बढ्यो भने अर्को चुनौती थपिने छ।
मध्य असारमा आन्तरिक उडान खुलेमा धेरै एयरलाइन्सका लागि खुल्नेवित्तिकै उडानका लागि चाहिने दैनिक नगदकै समस्या पर्ने छ। एयरलाइन्सका जहाज जब उड्छन् खर्च स्वभाविक रूपमा बढ्ने छ। उनीहरूले सहज ऋणको अपेक्षा सरकारसँग गरेका छन्। यति गरिदिएमा उनीहरूले भनेअनुसार उडान त गर्ने छन्। तर अर्को चुनौती उनीहरूका अगाडि थपिने छ।
शून्य आम्दानीमा ५० प्रतिशत लागतमा बसिरहेका एयरलाइन्सका जहाज जब उड्न थाल्छन्। त्यस्तोमा उनीहरूलाई आवश्यक नगद ऋणबाट पूर्ति गर्नेछन्। ऋण लिएर आम्दानीको आशमा उडान गरेका उनीहरूले भनेजस्तो यात्रु पाउने नपाउन सक्छन्। किनभने जहाज खुल्नेवित्तिकै मान्छेहरूको आम्दानी बढ्ने छैन। ठप्प भएको आर्थिक गतिविधिले मान्छेको आम्दानीमा असर पार्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा लकडाउन अघिको जस्तै धेरैले जहाजको यात्रा गर्छन् भन्ने निश्चित छैन।
यस्तो अवस्थामा उनीहरूका लागि नोक्सानीको पारो झन् बढ्ने छ।
तर लकडाउन खुल्नेवित्तिकै एयरलाइन्सहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मागअनुसार जहाज उड्ने छन्। किनभने धेरै जहाज उडाउने उनीहरूसँग आवश्यक नगद हुने छैन। अर्कोतिर यात्रु पनि थोरै हुने छन्।
तर बुद्धका बस्नेत भने आशावादी छन्।
'मान्छेहरूको आम्दानी घट्ने छ। हामीलाई थाहा छ। तर हाम्रो प्याकेजको मूल्य पनि घट्छ। ६ हजारमै पोखरा गएर फर्किने प्याकेजमा मान्छे लोभिन सक्छन्'उनले भने,' आशावादी हुनुको विकल्प छैन।'
तर एक वर्षसम्म घाटामै उडान हुने निश्चित छ। गएको चैतदेखि शून्य व्यापार अबको एक वर्षसम्म घाटाको उडानले गर्दा केही अपरेटर बन्द हुनसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
लकडाउन अघि नै कमजोर आर्थिक अवस्थामा भएका एयरलाइन्सलाई उठ्न निकै गाह्रो हुनेमा शंका छैन। तर स्थापित ठूला एयरलाइन्स क्षमता घटाएर भए पनि अझै एक वर्ष टिक्न सक्छन्।
गएको सात वर्षमा सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि एयरलाइन्स बन्द भएका छैनन्। लाइसेन्स कायमै रहेको तर जहाज बिहिन भएको मकालु एयर बाहेक कुनै पनि एयरलाइन्स सन् २०१३ पछि बन्द नभएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
हाल नेपालमा ९ फिक्स्ड विङ तर्फका एयरलाइन्स छन् भने ९ वटा हेलिकप्टर कम्पनी छन्। ९ एयरलाइन्ससँग ५३ जहाज छन्। त्यस्तै ९ हेलिकप्टर कम्पनीसँग ३२ हेलिकप्टर छन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २६, २०७७, १२:४३:००
लेबनानको राजधानी बेरुतमा ठूलो विष्फोट, थुप्रै हताहत भएको शंका (भिडिओ)
'कोरोना भएपछि मलाई राष्ट्रपति लगायतले हिम्मत दिनुभो, आम नागरिकलाई राज्यले दिनुपर्छ'
बालुवाटार छलफल: सरकारका निर्णयप्रति प्रचण्ड र खनालको आपत्ति, ओलीको प्रतिवाद
प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञको सुझाव : लकडाउन गरौं, आवश्यक परे कर्फ्यूसमेत लगाऊँ
मलाई जिउँदै चिहानमा जानु थिएन
भदौ १ देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न १२ एयरलाइन्स इच्छुक
बजार खुलेपछि चम्कियो मोबाइल र मोटरसाइकलको व्यापार
बुवाले पहिलो पटक स्याउको बिरुवा ल्याए, छोराले गरे व्यवसायिक खेती (भिडिओ)
‘मेरो सेयर’ अब इसेवाबाट नवीकरण गर्न सकिने
सतर्कता अपनाएर पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. धनञ्जय रेग्मीको भनाई
पूर्वमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टको पुँजीवादी अवतार मुराहरि पराजुली
बाघ संरक्षणका अवसर र चुनौती आरती बस्नेत
जन-नेता गगन सिंह थापा
सुन्न चाहन्छौ, के छ मसँग? रेशमराज बोगटी क्षेत्री ‘रश्म’
शासकसँग प्रश्न मीनकुमार नवोदित
ठूलो झोला किनिदिनु है बाबा अर्पण अर्याल
धुलाम्मे फोटो आकृति तिमिल्सिना
कति दिन्छौ पीडा? आयुष बडाल